I-Seclude Ramgarh - I-Vasant (Ibhalkhoni Yabucala) - I-Airbnb
I-Seclude Ramgarh - I-Vasant (Ibhalkhoni Yabucala)
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguRohit
URohit unezimvo eziyi-138 zezinye iindawo.
Phuma kukungunda, cinga ngokutsha. Yiza uze uhlale kwigumbi leVasant apho ilanga lidibana khona unyaka wonke kwaye imbonakalo ivusa iimvakalelo. Ngaphakathi, umphandle weplanga kunye nefenitshala zibonisa ubushushu beyona nkwenkwezi ishushu. Eli gumbi lokulala limangalisayo, elinezinto zobugcisa ezigunyaziswe ngokukhethekileyo, libonelela ngeembono ezintle zentlambo iRamgarh kunye nebhalkhoni yayo yabucala. Umgangatho ophakamileyo, ibhedi enkulu yeplanga, ibhafu enethayile eyenziwe ngamatye, nganye iklasi yegumbi.
Ifakwe emaphethelweni engxondorha entliziyweni yeRamgarh, imi ubude beenyawo ze-4900 i-Seclude Ramgarh inika iindwendwe zayo amagumbi alithoba abekwe kakuhle kwaye amangalisayo, kunye neebhalkhoni ezifikelelekayo zokuthatha entlango. Apha isibhakabhaka siphethe onke amaphupha owakha waba nawo kwaye imithi isebeza amabali ayo. Iifestile ezinde zenza ukhangele iintaba ngaphambili, intlambo enzulu ezantsi. Kukho iindawo ezininzi zangaphandle onokuthi uzithathele kwimbono kunye nokubanda, kunye nomngxuma omkhulu womlilo oqhelekileyo wokukhanyisa kunye nokufudumeza iingokuhlwa zakho.
Sinompheki, ugcino lwendlu, umncedi kunye nomphathi okhoyo kwipropathi. Ukutya kunokuodolwa kwimenyu ekhoyo kwipropathi ngeentlawulo ezongezelelweyo, sinazo zombini iinketho ezikhoyo - isidlo sasekhaya kunye ne-a-la-carte.
4.75 · Izimvo eziyi-8
Ipropathi ibekwe eMalla Ramgarh, 25km ukusuka eNainital. Iivenkile kunye nemarike kuku-3-4 KM kude.
I am a quintessential maverick who approaches life with passion and joy. I have a head for numbers which serves my day job as a CA well. My heart is fulfilled by my love for trav…
Ndizakufumaneka efowunini okanye kwisms xa undwendwe lundifuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Naini Tal